प्रधानसेनापतिका भाई पनि चुनावी मैदानमा, नागार्जुनमा वडाध्यक्षका उम्मेद्वार — Imandarmedia.com
प्रधानसेनापतिका भाई पनि चुनावी मैदानमा, नागार्जुनमा वडाध्यक्षका उम्मेद्वार
काठमाडौं। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा युवा पुस्ता आर्कषित हुँदै गएका छन्। उम्मेद्वारी परेका मध्ये काठमाडौं महानगर सहित अहिले देशभर युवा पुस्ताको नै चर्चा बढी छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यहि बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय चुनावमा देशभर १ लाख ४४ हजार ८ सय ५९ जनाको उम्मेदवारी परेकामा युवा ५९ हजार ४ सय २ जना छन् ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न कलाकार, पत्रकारदेखि सरकारी कर्मचारी समेत अग्रसर देखिएका छन्। बहालवाला सेनापति प्रभुराम शर्माका भाई लक्ष्मीराम शर्मा पनि चुनावी मैदानमा छन्। उनी नाताले प्रधानसेनापति शर्माका कान्छो भाई हुन।
उनलाई सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं-४ मा वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ। स्थानीय माझ लोकप्रिय शर्माले यतिबेला मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्।
नागार्जुन नगलपालिका वडा नं-४ का मतदातामाझ आकर्षक संकल्प र घोषणा पत्रसहित शर्माले आजभोलि घरदैलो गरिरहेका छन्। यसअघि अघिल्लो स्थानीय चुनावमा झिनो मतले पराजित भएका शर्माले यसपटक आफ्नो जित सुनिश्चत रहेको दाबी गरे।
प्रतिस्पधी उम्मेद्वार भन्दा आफू वडाको नेतृत्व गर्न सक्षम र अब्बल भएकाले मतदाताको पहिलो रोजाईमा हुने बताए।
निर्वाचित भए जितेको भोलिबाटै संकल्पपत्रमा जारी गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम थाल्ने उनले बताएका छन्।
के छ वडाध्यक्षका उम्मेद्वार शर्माले सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा? तल हेर्नुहोस्!
–विभिन्न क्षेत्रमार्फत वडाको गरिमा उच्च बनाउन योगदान पुर्याउनुहुने व्यक्ति तथा समूहलाई सम्मान गरिनेछ। तसर्थ यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भई रुख चिन्हमा मतदान गर्न सम्पूर्ण आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।